KNOWLEDGE Archives - Padaethar
ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေရင် သေချာတယ် ချစ်နေပြီ
ပြောဖူးတဲ့ စကားတွေကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး။ ပေးဖူးတဲ့ ကတိတွေကိုလည်း အမြဲတမ်း တည်မိနေတယ်ဆိုရင် သင်က သူ့အပေါ် တန်ဖိုးထားမှုနဲ့ အတူချစ်နေတာ သေချာပါတယ် သေချာတယ် ချစ်နေပြီ တစ်ခါ တစ်ရံမှာ လူတစ်ယောက်ကြောင့် ရင်ထဲ ထူးခြားတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ ခံစားနေရပေမယ့် ကိုယ်သူ့ကို ချစ်နေတာ ဟုတ်မဟုတ် ဝေခွဲရခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငါသူ့ကို ချစ်နေမိလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်မေးပြီး အဖြေမရဘဲ အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေလည်း ရှိဖူးမှာပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေရင် ချစ်နေပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း Marry က ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အကြောင်းမဲ့ ပျော်ရွှင်မှု သူနဲ့တွေ့နေရရုံ၊ သူနဲ့ စကားတွေ … Read more
ဝေးပါစေလို့ ဆုမတောင်းခဲ့ပေမယ့် ရေစက်ကုန်တော့လဲ ဝေးသွားကြတာပဲ…
ဆုံပါစေလို့ ဆုမတောင်းခဲ့ပေမယ့်လဲရေစက်ရှိတော့လဲ ဆုံလာကြတာပဲလေ…. ဒါဆို လွမ်းစရာကို နာစရာနဲ့လဲ ဖြေစရာမလိုပါဘူးဥပေက္ခာနဲ့သာ နေရာယူပါ… အဆင်ပြေနေတုန်းတော့ အချစ်ဆုံးလို့ ပြောကြတာပဲ အလိုဆန္ဒတွေ မပြည့်ဝတော့မှ အမုန်းဆုံးဖြစ်သွားတတ်ကြတယ် ဒါကိုပဲ သင်ခန်းစာယူပါ အရမ်းလဲ ချစ်မပြနဲ့ အရမ်းလဲ မလွမ်းပြနဲ့ အချစ်ကြီးလို့ ရှုံးတာ မဟုတ်ဘူး ရိုးသားခြင်းကို ဟန်မဆောင်တတ်လို့ရှုံးတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ရှေ့ဆက်ပါ လမ်းခွဲခြင်းမှာ ဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့ ပန်းတိုင်းက ရနံ့မရှိပေမယ့်ပန်းတိုင်းက တန်ဖိုးရှိပါတယ် တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိရှိ တန်ဖိုးမဲ့တဲ့သူက တန်ဖိုးမထားတတ်ဘူးဆိုတာကိုလဲ နားလည်ပါ တန်ဖိုး နားလည်ပြီး တန်ဖိုးထားတတ်သူနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ကြ၍ ဘဝတွေလဲ အေးချမ်းပါစေနှလုံးသားတွေလဲ လှပနိုင်ကြပါစေ သုအလင်္ကာ(ရွှေသင်း) Credit Unicode ဆုံပါစလေို့ ဆုမတောငျးခဲ့ပမေယျ့လဲရစေကျရှိတော့လဲ ဆုံလာကွတာပဲလေ…. ဒါဆို လှမျးစရာကို နာစရာနဲ့လဲ ဖွစေရာမလိုပါဘူးဥပက်ေခာနဲ့သာ နရောယူပါ… အဆငျပွနေတေုနျးတော့ … Read more
အိမ်မက်မက်တတ်ရင် သိမ်းထားပါ (က) မှ (မ) ထိ
(က) မွ (မ) ထိ [ က ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ ၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည့်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့ ၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူု မယားကောင်းရအံ့ ၃။ ကြာသွတ်အိုးနှင့် ရေချိုးရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့၏မှီခိုရာ ဖြစ်အံ့။ ကြာသွတ်အိုးမြင်မက်မူ စည်းစိမ်များအံ့ ၄။ ကြာပန်းစသည်မြင်မက်မူ ဖျားနာအံ့ ၅။ ကျွဲစီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျေးကျွန်ရအံ့ ၆။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ မြေခွေး၊ လင်းတ တိရစ္ဆာန်တို့ကို မြင်မက်မူ ဥပါဒ်ရောက်အံ့ ၇။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ဆင်၊ မြင်းတို့အား ကောင်းသော အခြင်းအရာဖြင့် မြင်မက်မူ နတ်စိမ်းတို့ နှစ်သက်အံ့ … Read more
၃ရက်အတွင်း မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေကို ပျောက်စမယ့် လျှို့ဝှက်နည်းတစ်ခု
၃ရက်အတွင်း မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေကို ပျောက်စမယ့် လျှို့ဝှက်နည်းတစ်ခု မျက်နှာတစ်ခုလုံး အနာအဆာမရှိပဲ ကြည်လင်ဝင်းပချင်တာက အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေ မျက်နှာပေါ်မှာ အမဲစက်ကြီးတွေမြင်နေရရင်ကို လူက စိတ်မကြည်မသာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေတောင် ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အတွက် စာရေးသူဆေးတစ်ခုရှာတွေ့ထားတယ်။ ခက်တယ်မထင်လိုက်နဲ့။ မီးဖိုချောင်မှာမွှေနှောက်ရှာလိုက်ရုံနဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ရသွားမှာပါ။ အဲ့ဒါကတော့ အာလူးသံပုယို ရေခဲတုံးပါ။ သံပုယိုသီးမှာ အရည်ပြားကို လင်းပြီးဖြူလာစေပါတယ်။ အာလူးကတော့ အမည်းစက်တွေကို တိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးရောထားတဲ့ စူပါရေခဲတုံးကတော့ အသားအရေကို ပြန်လည်နုပျိုစေတဲ့အပြင် အမည်းစက်တွေကို သိသိသာသာ သက်သာစေမယ့် အာနိသင်ပါဝင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ အာလူး -၁လုံး တလဲသီး- ပန်းကန်လုံး တစ်ဝက် သံပုယိုသီး- တစ်ခြမ်း ရေခံပုံစံခွက် -တစ်ခု ပြုလုပ်နည်း အာလူးတစ်လုံးကို သေချာအခွံနွှာဆေးပြီး ခြစ်ခွက်နဲ့ … Read more
Categories BEAUTY, KNOWLEDGE
ကတိတွေပေးပြီး မတည်နိုင်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ကတိစကား (၇) မျိုး
အချစ်ရေးမှာ မိန်းကလေးတွေက ယောကျာ်းလေးတွေဆီကနေ ကတိတွေအမျိုးမျိုး တောင်းတတ်ကြပြီး ယောကျာ်းလေးတွေကလည်း ကတိတွေအများကြီး ပြန်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ကတိတွေ ဘယ်လောက်ပေးပေး တချို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကတိတွေကိုတော့များသောအားဖြင့် မတည်နိုင်ကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုပေးပေမယ့် တည်နိုင်ဖို့ခက်တဲ့ ကတိတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) သဝန္မတိုပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိ စုံတွဲတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ပြဿနာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သဝန်တိုပြီးချုပ်ချယ်တာတွေကြောင့်ပါ။ သင်က အဲ့ဒါတွေကို စိတ်ကုန်လို့ သင့်ချစ်သူကို သဝန်မတိုဖို့ ဘယ်လောက်ပဲပြောပြော အဲ့ဒီကတိကိုတည်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ကိုယ့်ချစ်သူက တခြားယောကျာ်းလေးတွေနဲ့ ရောနေတာကို မြင်ရရင် မနာလိုဝန်တိုစိတ်မဖြစ်တဲ့ ယောကျာ်းဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သေချာပေါက် သဝန်တိုမှာပါ။ တကယ်လို့ သူ့ဘက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒါသဘောထားကြီးလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုမချစ်လို့ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် …။ (၂) … Read more
မွေးလ နက္ခတ်အလိုက် ပြောပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့ အချစ်ရမ္မက်အကြောင်းများ
သင့်ရဲ့မွေးလဟာ သင့်ရဲ့ ချစ်ရမ္မက်လိုအင်ဆန္ဒအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိရဲ့လား ဆိုတဲ့ မွေးခွန်းကိုတော့ “ဟုတ်ပါတယ်” လို့ နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာ Suzie Kerr Wright က ပြန်လည်ဖြေကြားထားပြီး အဲဒီအထဲမှာတော့ ဇန်နဝါရီလ မွေးဖွားသူတွေဟာ ချစ်ရမ္မက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မူမမှန်ဆုံးသူတွေ ဖြစ်ကြသလို နိုဝင်ဘာလ မွေးဖွားသူတွေကတော့ ချစ်ရမ္မက် အပြင်းပြဆုံးသူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၁။ ဇန်နဝါရီ ဇန်နဝါရီလ မွေးဖွားသူတွေဟာ ချစ်ရမ္မက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မူမမှန်ဆုံး လက္ခဏာရှိသူတွေ ဖြစ်ကြပေမဲ့ သူတို့မှာ နိုဝင်ဘာလ မွေးဖွားသူတွေနဲ့ တူညီနေပြန်တဲ့ အချက်ကတော့ အိပ်ယာပေါ်က လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ကြသူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂။ ဖေဖော်ဝါရီ ဖေဖော်ဝါရီလ မွေးဖွားသူတွေဟာ စွန့်စားလိုမှု အရှိဆုံးအဖြစ် ပြောစမှတ်ခံရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ရမ္မက် … Read more
နောက် ၁၀ နှစ်ကြာလျှင် သင့်ကိုနောင်တရစေမယ့် အရာများ တကယ်လို့ နောက် ၁၀ နှစ်ကျရင် သင်ဒါတွေကြောင့် နောင်တရမယ်ဆိုတာကို သင်ယခုသိမယ်ဆိုရင် သင်ပြုပြင်နိုင်မလား။ ဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်………. ၁။ မျက်နာဖုံးစွပ်ပြီး အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်း သူများရဲ့အထင်အမြင်ကို အထူးအလေးထားမယ်။ သူများဝေဖန်မူကို အမြဲစိုးရိမ်နေမယ်။ သူများအလိုကျ အသက်ရှင်နေထိုင်မယ်။ သူများအထင်ကြီးတဲ့ ပုံစံအတိုင်း နေထိုင်ပြမယ် ဆိုရင် နောက်ဆုံးတော့ ဟန်ဆောင်မှန်းမသိ ဟန်ဆောင်မိပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျောက်ဆုံးပြီး ဂုဏ်၊ အဆင့်အတန်း၊ အတန်းအစား စတဲ့ အတုအယောင်တွေကြားမှာ ဟိုတူညီဝတ်စုံဝတ်လိုက်၊ ဒီဖွင့်ပွဲသွားလိုက်၊ ဟိုနေ့စုဝေးလိုက် ဟိုဟာဝိုင်းစားလိုက်၊ ဓါတ်ပုံတင်လိုက်၊ ဒီနေ့စုဝေးလိုက့်၊ ဒီဆိုင်မှာစားလိုက်၊ ဓါတ်ပုံတင်လိုက်နဲ့ တဝဲလည်လည်နွံနစ်သလိုပါပဲ နှစ်လေနက်လေ ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ကိုယ်တကယ်တန်ဖိုးထားရမဲ့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေး၊ သားရေးသမီးရေးတွေ အာလုံးလစ်ဟင်းကုန်ပါတော့တယ်။ ၂။ အခြားသူများမှ မိမိအိမ်မက်ကို … Read more
သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ မိသားစုဝင် အချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ ချစ်သူရည်းစားအချင်းချင်းဖြစ်စေ တစ်ခါတလေမှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ပြဿနာတွေ​ မဖြစ်ရလေအောင် လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ မလိုအပ်ဘဲ အငြင်းအခုန် မလုပ်ပါနဲ့ လူတိုင်းဟာ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ဘဝ အတွေ့အကြုံချင်း မတူညီကြတာမို့ သူ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်စိတ်၊ သူ့ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ့်ခံယူချက် အားလုံးဟာ ထပ်တူမကျနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကြားက မတူညီမှုတွေကို နားလည်ပေးတတ်ရပါမယ်။ ဘာမှ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ရင် အငြင်းအခုန် မလုပ်ဘဲနေတာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ၂။ စကားတစ်ခွန်း မပြောခင် ၃ ကြိမ်စဉ်းစားပါ ကျွန်‌တော်တို့တွေက တစ်ခါတလေ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောမိတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်း​ကြောင့် တစ်ဖက်သားကို ခံစားသွားရစေနိုင်တာမို့ စကားတစ်ခွန်း မပြောခင်မှာ အနည်းဆုံး … Read more
ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးနေတဲ့ မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ
April 26, 2021 by Padaethar
ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးနေတဲ့ မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးနေတဲ့ မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ fbသုံးနေတဲ့မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အနည်းငယ်သာပြောင်း၍ရေးပါသည်။တစ်နေ့ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လူလတ်ပိုင်းဓာတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အကောင့်တစ်ခု မက်ဆင်ဂျာကနေညီမလေး အစ်ကိုစကားနည်းနည်း ပြောချင်လို့ ရလား “ဆိုပြီးစာဝင်လာတယ်။ အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ လို့ရေးမိလိုက်တာနဲ့ဗွီဒီယိုကော ခေါ်တာခံလိုက်ရတယ်။ရုပ်ဖြောင့်သလောက် အပြောကောင်းလွန်းလှတဲ့သူ့ စကားတွေကြားမှာဖုန်းကို ပိတ်မပစ်ရက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ”အပျိုလား” ဆိုတဲ့သူ့စကားကကျမကို နည်းနည်း တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ခနလောက်ငိုင်နေပြီးမှကျမယောင်္ကျားနဲ့ ကျမ အတူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံ ပို့ပေးလိုက်တယ်။“ညီမတို့ ချစ်သူတွေလား “ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးက ကျမကို ကြည်နူးသွားစေပါတယ်ဘေးနားမှာ အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့သားလေးကိုမလုံမလဲ ကြည့်လိုက်မိတယ် ။ ကျမယောကျာ်း လူရိုးကြီးကတော့ယာတောကပြန်မလာသေးပါဘူး။ကျမ ထင်လိုက်တာကတစ်ခါတည်းနားအေးအောင်ဆိုပြီး အမှန်ကိုချပြလိုက်တာမှ ပိုဆိုးသွားပါတယ် တိုတိုနဲ့လိုရင်းကိုပြောရရင်ကျမ တို့နေ့တိုင်းဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဖုန်းမလာရင်ကျမကစခေါ်တတ်နေပါပြီကျမယောက်ျား လူရိုးကြီးကတောဘာမှမသိရှာပါဘူး။သူ့ကတော့ ကျမကိုသိပ်ပြီးဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူးယာတော နဲ့အိမ် ကူးနေတာနဲ့သူ့ကျွဲတွေနဲ့တင် အချိန်ကုန်နေရှာတာပါ။ … Read more